Sina 3 Karazan-gym amin'ny lehilahy manao an'ireo lehilahy maoderina mahita ny ozinina sy mpanamboatra tena mahasarika | AIKA
Karazana gym fanaovana lehilahy 3 manao an'izany lehilahy maoderina izany no tena mahasarika
Ny lehilahy ankehitriny dia mazoto mahazo endrika. Miaraka amin'ny abs toned sy bisikileta hozatra amin'ny fironana, ny ankamaroan'ny lehilahy dia mankeny amin'ny gym mba hahazo vatana toy ny tena tiany
mpilalao sarimihetsika. Ny gym dia toerana ahafahanao mifanerasera sy manao namana ihany koa. Ary noho izany, ny mijery tsara dia nanjary zava-dehibe amin'ny lehilahy mandritra ny fotoana fanazaran'izy ireo.
Miaraka amin'ny akanjo fanaovana spaoro mpanamboatras miakatra amin'ny famolavolana akanjo vaovao, dia hanana safidy maro amin'ity sokajy manokana ity ianao. Na izany aza, mifantina ny tsara
akanjo ho an'ny gym dia tena zava-dehibe. Ireto misy karazana akanjo enao izay hitanao amin'ny Internet. Topazo maso fotsiny.
Mandehana ho an'ny T-Shirt vita amin'ny lamba maloto hamandoana:
Ny fandehanana any amin'ny gym dia tsy ho asa mankaleo intsony raha miditra ao fanangonana maro loko ny fanaovana fanatanjahan-tena misy any amin'ny fivarotana an-tserasera. Ny zavatra tsara indrindra momba
ny mikotrana T-shirt dia hoe afaka matory ao amin'izy ireo akory ianao. Noho izany, rehefa manana fandaharam-potoana maraina amin'ny gym ianao dia tsy mila manova ny akanjonao izay mety
vonjeo ny fotoana koa. Amin'ny fahavaratra, azonao atao ny misafidy ireo t-shirt mamelombelona hamandoana ary mitazona ny tenanao ho maina. Ny lamba toy ny polyester na Spandex dia afaka mitondra ny anao
hatsembohana amin'ny sosona ivelany amin'ny lamba izay mahatonga ny hatsembohana ho etona mora kokoa.
Ny tank top dia afaka maka ny fombanao Quotient avo kokoa:
Ankehitriny ny lehilahy dia afaka mankafy ny fahalalahana manao akanjo tsy misy tanany miaraka amin'ny tampon-tanky maro karazana misy amin'ny Internet. Ireo izay te-hampideradera izay ananany
tratra, tank tank dia mety ho safidy tsara indrindra ho azy ireo. Ireo akanjo fanaovana fanatanjahan-tena ireo dia tonga miaraka amina endrika sary izay afaka manatsara ny endrikao fotsiny. Ianao dia afaka
misafidy amin'ny fanangonana tampon-tanky mifono vy sy tery, miankina amin'ny volavolanao.
Pataloha Track Stylish:
Ny pataloha Track no safidy tsara indrindra rehefa mila fandrakofana faran'izay betsaka ianao, indrindra amin'ny ririnina. Namboarina tamina lamba malefaka, ireto pataloha lalana ireto dia hahafahanao mihetsika
malalaka tsy misy sakana. Raha miresaka loko, dia hahita safidy maro isafidianana ianao. Fahendrena ny mitady ireo mahia manify toa mahia loatra na koa
pataloha tery tsy hanohana ny hetsika ataonao.
Noho izany, izao dia afaka mifikitra amin'ny fombanao ianao na dia ao amin'ny gym aza. Zahao ny tamponymagazay an-tserasera hihazonana ny endrika tsara indrindra amin'ny akanjo fanaovana gym.